အိုအိုင်စီ ရုံးဖွင့်ခွင့်မပြုလို့ သမ္မတ ထပ်မံကတိပေး မြန်မာဌာန
အိုအိုင်စီ ရုံးဖွင့်ခွင့်မပြုလို့ သမ္မတ ထပ်မံကတိပေး နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဟာ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ဒီကနေ့ အောက်တိုဘာလ ၂၁ရက်နေ့ မနက်က နေပြည်တော်မှာ ရှိတဲ့ သမ္မတ အိမ်တော်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
နေပြည်တော် သမ္မတအိမ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွေ ပြုလုပ်သည့် သမ္မတ၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ (ဓါတ်ပုံ သမ္မတရုံး အင်တာနက် စာမျက်နှာ) ဒီကနေ့ ပြည်တွင်း ၊ ပြည်ပ သတင်းစာဆရာတွေကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး၊သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပရတဲ့ အကြောင်းကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က အခုလို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ဒီကနေ့ ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ပြည်တွင်း၊ပြည်ပက သတင်းစာဆရာ ၁၇၀ ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို တက်ရောက်လာတဲ့ သတင်းစာဆရာတွေကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က နေပြည်တော်၊ဟိုတယ်ဇုန်က ရွှေဧည့်သည်ဟိုတယ်မှာ ညစာနဲ့ တည့်ခင်းဧည့်ခံမယ်လို့ သိရပါတယ်။
Yes,we are very afraid extremist VIRUS .
Oct 24, 2012 08:09 PM
U Thein Sein, your plan that's all ? Are you still covering for benefit of all General ? Who stay behind of Rakhine problem. We do not think both side actual problem. Oct 24, 2012 10:08 AM
Oct 24, 2012 02:44 AM